Sarkaal sare oo Soomaaliland iyo ciidamo uu wato oo Puntland isku soo dhiibay – Radio Daljir
Sarkaal sare oo Soomaaliland iyo ciidamo uu wato oo Puntland isku soo dhiibay
Agoosto 29, 2018 12:39 g 0
Sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa isku soo dhiibay maanta dowladda Puntland. Sarkaalkan ayaa waxaa lagu magacaabaa Korneel Muuse Axmed Yuusuf, wuxuuna ka soo ambabaxay jiidda hore ee deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
Korneel Muuse Axmed ayaa sheegay in sababta uu uga soo baxay maamulkii uu katirsanaa ay tahay caddaalad-darro ka jirta Somaliland iyo talada oo ay maroorsadeen beesha uu ka soo jeedo Madaxweyne Muuse Biixi.
Horay waxaa duleedka degmada Qardho ku sugnaa Korneel Caarre iyo ciidamo xooggan oo uu wato oo ka soo goostay Soomalailand, magangalyana ka helay Puntland.
Muuqaalka Bulshada ee Radio Daljir: Hoos-u-dhaca miisaaniyada dowladda Puntland 2017-2018